Jurgen Klopp oo helay war aad u fiican kahor kulanka soo aadan ay Liverpool la ciyaari doonto Man City – Gool FM
(Liverpool) 08 Nof 2019. Liverpool ayaa isku diyaarineysa kulanka ay Axada soo aadan garoonkeeda Anfield ku soo dhaweyn doonto kooxda Manchester City, kaasoo ka tirsan kulamada 12-aad ee horyaalka Premier League.
Xiddigaha kooxda Liverpool ayaa waxay markii ugu horreysay shalay oo khamiis ah ku soo wada laabteen tababarka, kaddib guushii ay Talaadadii kaga gaareen naadiga Genk tartanka Champions League.
Haddaba tababarkii ay shalay sameysay kooxda Liverpool ayaa waxaa lagu dhex arkay war aad ugu wanaagsan macalinka reer Germany ee Jürgen Klopp iyo taageerayaasha, kahor kulanka la wada sugayo ay Axada ku wajahayaan kooxda Manchester City horyaalka Premier League.
Si kastaba ha noqotee, Kabtanka Liverpool ee Jordan Henderson ayaa shalay dib ugu soo laabtay tababarka kooxda, kaddib markii uu ka soo kabsaday xanuunkii uu qabay maalmihii dhawaa.
Jordan Henderson ayaa seegay ciyaartii ugu dambeysay ee Liverpool ay la ciyaartay naadiga reer Belgium ee Genk maadaama uu xanuunsanaa laakiin wuxuu soo laabtay ka hor kulanka Manchester City.
Yeelkeede, taageerayaasha kubadda cagta ee adduunka ayaa waxay sugayaan kulanka weyn ee Axada ku dhex mari doono kooxaha Liverpool iyo Manchester City garoonka Anfield, kaasoo ka tirsan kulamada 12-aad ee horyaalka Premier League.